Soomaali la ilaaway oo fariin u diray Ra'isul wasaare Xasan Kheyre - Caasimada Online
Home Warar Soomaali la ilaaway oo fariin u diray Ra’isul wasaare Xasan Kheyre
Soomaali la ilaaway oo fariin u diray Ra’isul wasaare Xasan Kheyre
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maalmihii ugu danbeeyay sii kordhaayay dilalka loo geysanaayo Soomaalida ku nool dalka South Africa, gaar ahaan Gobolada dalka.
Kooxo ku midoobay boobka iyo xalaaleysiga dhiiga Ganacsatada ayaa u gaarsi joogta ah ku haya Ganacsatada, inkastoo aanu jirin cid ilaa iyo ka hadashay arrintaas.
Ganacsatada oo xiligaani la kulmaaya culeyska ugu badnaa ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay wax ka qabato dilalka loogu geysto.
Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre iyo Wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad ayey ugu baaqen in il gaara lagu eego dhibta lagu hayo oo xadka kasii gudbeysa.
Waxa ay sheegen inay halis ugu jiraan xitaa in la ugaarsado Curruurtooda, iyagoo laga raacaayo Soomaalidinimada, waxa ayna ku baaqen in laga badbaadiyo kuwa xalaaleystay hantidooda.
”Waxaan dareemeynaa in dowladu ay nagu hilmaantay South Africa, ma garankarno sababta ay dowlad weliba oo ka dhalata Somalia ay uga mashquusho wax ka bedelka dhibta nalagu hayo” ayuu yiri Yuusuf Maxamed oo kamid ah Ganacsatada.
Waxa uu intaa raaciyay in dhibta ku dhaceysa aysan waxba u arag dowlada South Africa, isla markaana ay xusid mudan tahay in goobaha ay falalka noocaasi ka dhacaan ay ku sugan yihiin ciidamo boolis ah.
Si kastaba ha ahaatee, dowlada South Africa ayaan ka hadal dhibaatada sii baaheysa ee lagu hayo Ganacsatada Soomaalida ah.